Famantarana ny fisotroan-toaka amin'ny vehivavy
Ny fisotroana alikaola dia aretina mahatsiravina izay mitarika ho amin'ny fandringanana ny fiadanana sy ny fahasalamana anaty. Vokatr'izany, misy olona iray mahita fotsiny hoe any amin'ny farany ambany, mamoy namana, miasa ary singa manan-danja hafa amin'ny fiainana sambatra. Ny olana dia mety ho, fa manan-danja ihany ny mijery ireo famantarana voalohany amin'ny fisotroana toaka , mba hanampiana vehivavy iray hivoaka amin'ny tranonkala mampidi-doza. Araka ny antontan'isa isan-taona dia miha-tanora io olana io, ary mihelina haingana kokoa noho ny lehilahy ny vehivavy. Misy antony maromaro mahatonga ny vehivavy hiteny tavoahangy ary matetika izy no mifandray amin'ny fihetseham-po, ny fahaketrahana ary ny adin-tsaina matetika. Ankoatra izany, ny voina rehetra dia mety ho olana ara-tsosialy, ary koa olana amin'ny fianakaviana.
Ny "Fitiavana" ho an'ny zava-pisotro misy alikaola dia manomboka amin'ny fisotroana toaka an-tokantrano, izay manamarika matetika ny fisotroana zava-pisotro misy alikaola, fa tsy misy miankina amin'ny zava-mahadomelina. Ny marika famantarana ny fisotroan-toaka an-tokantrano, izay manavaka azy amin'ny fotoana maharitra, dia ny fisotroan'ny vehivavy iray amin'ny sitrapo ary afaka mifehy ny doka. Mbola afaka misotro toaka ihany izy. Ankoatra izany, rehefa misotro toaka be dia be ny soritr'aretina.
Amin'ny ankapobeny dia misy dingana roa amin'ny fampivelarana ny fiankinan-doha, izay tsy mitovy amin'ny fahasarotan'ny olana, fa amin'ny toetra mampiavaka azy ihany koa. Ny ankamaroan'ny vehivavy dia manandrana manafina ny fitiavan'ny alikaola amin'ny hafa, noho izany dia aleony misotro fotsiny. Eto amin'ity sehatra ity, misy ny fahatsapana mamitaka izay mitondra alikaola mitondra alahelo. Ny marika voalohany amin'ny fisotroana tafahoatra ao anaty vehivavy dia mety hafenina amim-pahombiazana amin'ny fanampiana ny menaka fanadiovana, saingy vetivety dia miharatsy ny toe-draharaha ary tsy misy ny fototra. Misy fiakaran'ny tarehimarika, misy kitapo lehibe eo amin'ny masony sy mena eny amin'ny hoditra, ary miharatsy ny toetran'ny volo sy ny fantsika. Mbola misy ihany ny tahotra tanana. Nijanona nijery ny tenany ny vehivavy, hany ka toa tsy maninona izy. Ny famantarana ara-psikolojika momba ny fisotroan-toaka vehivavy eo amin'ny ambaratonga voalohany dia ahitana ny fisehoan'ny hatezerana, ny fahatsiarovan'ny fahatsiarovan-tena ary ny faniriana ho irery amin'ny tenany ihany. Ny faritr'ireo tombontsoa dia fiovàna tanteraka.
Rehefa miharatsy ny toe-draharaha dia miteny momba ny fiankinan-doha ara-batana faharoa izy ireo, izany hoe rehefa efa zatra ny alikaola. Ny vehivavy iray amin'ny maraina dia mahita ny aretina isan-karazany, izay azonao vonjimaika amin'ny alalan'ny fisotroana doka vaovao. Ny famantarana ny fisian'ny alkaola, voalaza etsy ambony, dia mihamitombo, ary ny hoditra dia mahazo alokaloka mavo, ary miharihary kokoa ny famantarana ny fahanterana. Ny dingana faharoa amin'ny fiankinan-doha amin'ny toaka dia manan-danja tokoa amin'ny taova sy ny asan'ny vatana. Koa satria tsy misy fanaraha-maso ny habetsaky ny alikaola ateraky ny alikaola, dia misy foana ny fikorontanan'ny vatana. Ny fery lehibe indrindra dia mianjera amin'ny atiny ary mampitombo ny mety hisian'ny hepatita sy ny cirrhosis . Ny fiantraikany ratsy amin'ny alikaola amin'ny asan'ny fibobohan-toaka, ny toetry ny rafi-pihariana foza, ary ny vavony sy ny tsinay.
Ankehitriny dia mikasika ny toe-batana ara-psikolojika ny vehivavy, rehefa eo amin'ny dingana faharoa ny fisotroana toaka. Ny selan'ny atidoha dia mitondra enta-mavesatra, izay miteraka ny necrosis. Vokatr'izany, misy vehivavy mijaly amin'ny fanandramana, paranoia ary demindia koa. Mihamaro foana ny tsy fahombiazan'ny fahatsiarovan-tena ary ny soatoavina rehetra mifandray amin'ny olona tsotra dia very. Misy ny faharerahana misy alikaola izay manimba ny fiainan'ny vehivavy, ary hitany eny amin'ny farany ambany.
Ny fiheverana fa ny tsy firaharahiana ny fisotroan-toaka vehivavy dia angano, ary mba hanavotana olona miankina amin'ny alikaola, ilaina ny mamantatra ny olana amin'ny fotoana sy mifandray amin'ny andrim-panjakana manokana.
Ny firaisana ara-nofo
Tahotra ny Clowns
Frustration amin'ny psikolojia sy sosialy - ahoana no hiatrehana ny fahasorenana?
Review of the book "A Cup Warm on a Day Cold - How Sensual Feelings Affect Our Solutions," Talma Lobel
Ahoana ny fahazoanao fa kolikoly ianao?
Cocktail amin'ny gilasy sy ronono
17 zavatra madinidinika izay azonao nividy amin'ny magazay an-tserasera
Tavoahangy miaraka amin'ny laisoa avy amin'ny dite
Puzzles Crystal 3D
Ny olona akaiky indrindra
Doppler amin'ny sambo kely
Ny tongon-tsoavaly - ny sakafo mahasalama mahazatra indrindra sy ny endriny vita amin'ny feta
Volon-kiran'ny ranomandry ho an'ny volo
Ny endriny mampitolagaga sy ny lozam-piraharan'i Macaulay Culkin
Akanjo avy amin'ny kapron kapron
Ahoana ny fomba hananganana mpitarika?
Regidron - mari-pamantarana ampiasaina
Mora haingana ny manala ny tavin'ny vavony?